Amaqhinga okuThengisa ngeSelfowuni Ukumiliselwa ngo-2009 | Martech Zone
Amaqhinga okuThengisa ngeSelfowuni aMisela ngo-2009
NgeCawa, nge-4 kaJanuwari 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
The Ingqungquthela yeWebhu 2.0 eqikelelweyo Ukukhangela ukuThengisa kunye nokuThengisa ngeMfonomfono kwakuza kuba kukhulu ngo-2009. Ndaye ndasela ikofu nomhlobo wam, uAdam Small, ngoMgqibelo nowakhe Inkampani yokuThengisa ngeSelfowuni apha eIndy ikhule kakuhle - ngakumbi kwikota ephelileyo. Uninzi lokukhula kwakhe lubangelwe kukuqina API kunye nokuba bhetyebhetye kwakhelwe ngaphakathi kwezicelo zakhe zokuthengisa.
Ukuthandwa kwazo zombini ezi mediums kungenxa yexabiso lazo eliphantsi, ifuthe eliphezulu, ifuthe elinokulinganiswa, kunye nokukwazi kwabathengisi ukudibanisa nokwenza iikhankaso.
Ukuthengisa okuSelfowuni kubandakanya:
Imiyalezo ebhaliweyo kunye Izaziso -Kuba amandla abo asekwe kwimvume esekwe kwimvume, ndiyakholelwa ukuba intengiso esekwe kwi-SMS izakufezekisa ukukhula okunamandla. Abantu ngoku basebenzisa izixhobo zabo zeMfonomfono njenge 'fayile' yokuhlaselwa kwemiyalezo abayifumanayo ngezinye iindlela.
Izicelo zefowuni -Kunye ne-iPhone, iBlackberry Storm, kunye neefowuni zikaGoogle zikaGoogle ezihamba phambili, lithuba elihle lokwakha usetyenziso okanye iiwijethi ezivumela abasebenzisi beselfowuni ukuba basebenzisane nenkampani yakho okanye isoftware yakho ngefowuni. Akufuneki ukuba ibe yinto ephathekayo ephathekayo, isicelo… gcina engqondweni ukuba ujongano olusebenza kakuhle kwisikhangeli esikufumanayo sinokukufumanela into oyifunayo!
Ukuthengisa ngeBluetooth - Intengiso yeBluetooth kukungena ngaphakathi, kwintengiso esekwe kufutshane. Ngokusisiseko, if Umsebenzisi unikwe iBluetooth kwaye bahamba ngaphakathi kwindawo okuyo, isilumkiso singathunyelwa kwifowuni. Ifuna ukubanjwa ngesandla kunye nokukhetha ukungena, kodwa kuba umthengi akalucelanga unxibelelwano andinguye umlandeli.
Andibandakanyi Imiyalezo yelizwi Kwintsapho 'yentengiso eshukumayo', kodwa kufanelekile ukuba ujonge ubuchwephesha obungenakukholwa njengoVontoo. Kwi-high-tech cusp nazo iinkonzo zisebenzisa ukuqonda kwelizwi njenge Inkonzo yokufowuna kwinkomfa Hey Otto!
Enkosi kuKatie ngokuthumela i Iselfowuni yokuThengisa ukuHamba kwaye undinyanzele ukuba ndibhale le posi!
tags: 2009urhwebo mobile
Ukugxeka iBhanki, hayi umphangi
Jamie | UJakob
Jan 5, 2009 ngo-12: 55 PM
Ukuthengisa ngeBluetooth kuyandibetha njengokuncinci kancinci okwenyani. Ndidla ngokugcina eyam ikhubazekile, nangenxa yeebluetooth ze-trojans ezizama ukusasaza abantu abangathandekiyo.
Jan 5, 2009 ngo-5: 53 PM
Kunika umdla ukubona into enokuza kwikamva lentengiso eshukumayo. Ndivumelana nawe ukuba ukuthengisa ngeBluetooth kubonakala kungathandeki, kwaye njengomphawuli ongentla uthe, luhlobo olothusayo.
Kuphando lwam lwentengiso ephathekayo, ndiyifumene le posi iluncedo malunga nomehluko phakathi kwentengiso ephathekayo kunye ne-mcommerce. http://lunchpail.knotice.com/2008/12/22/101-m-commerce-or-mobile-marketing/